hahafantatra ny - NY LAHATSARY AMIN'NY CHAT. Mampiaraka an-tserasera!
Ary tsy azoko tena tsara tarehy sy tiako ny ho kamo
Aleo kapaina amin'ny Facebook, ny hevitra ny handeha ho any amin'ny lehilahy voalohany dia tsy mazava aminareoTsy hoe tsy te-hitsena ny nicest, mety indrindra, mahomby indrindra ny olona. Fa ianao dia feno hatsaran-toetra, dia ilaina ny mampirisika ny olon-tiany eo amin'ny tsena ny tenanao."Ho ahy, ny fanontaniana na ny vehivavy dia tokony sy ny tsy tokony hanomboka ny fivoriana dia mazava,"hoy psikology Giovanni.
Ary izay nilaza fa io toetra io dia marina
Ny vehivavy foana no misafidy ny olona, ary inona no tetika izy mampiasa ny - dia ny tsara indrindra na ny akanjo tonga lafatra miaraka amin'ny tolotra ny kafe-dia ny tsipiriany. Momba ireo tsipiriany sy ny scratches teo amin'ny lohany, tompoko. Araka ny fanadihadiana, mino ny ankamaroan'ny olona fa ny hanjo mora namana eo amin'ny fiaraha-monina ("amin'ny antoko izay olona rehetra mahafantatra ny tsirairay, ny mafy kokoa ny hihaona ny adala olona"), any am-piasana ("inty aho hahita ny tenako matetika kokoa sy intsony"), ao amin'ny Internet ("indraindray, mazava ho azy"), kely fa mora kokoa ny mijanona incognito, tsy mampatahotra toy ny manatona ny olona ao amin'ny bara") sy any amin'ny toerana be olona amin'ny olon-tsy fantatra ("aho, ohatra, lasa mpikambana ao amin 'ny yacht club-fara fahakeliny, ny fifaninanana ary feno ry zalahy ao lena t - shirt").
Ary toy pubs, toeram-pivarotana sy ny alahady kilasy ao amin'ny Politeknika, ianao dia manontania tena hoe: ahoana, iza, rehefa.
Elvira, ny psikology, ny tompon-NLP sy mpanoratra ny fampiofanana"Mampiaraka ny fomba Fanao ao an-tanàna"dia hanala ny fisalasalana rehetra. Azony atao, miandry. Tsarovy: impiry no manana ny fiainana nandà ny hanome ny olona iray ny finday maro, ary vao hilaza azy ireo ny anarany? Ankehitriny, mametraka ny tenanao ao amin'ny toerana misy ny olona ara-dalàna izay tianao ho manana fifandraisana. Rehefa nanaraka ny fahalalana ao amin'ny ny fitaterana orinasa, toy ny anareo, dia nandà ny hetsika rehetra. Teo amin'ny faha (ary koa ny manan-tsaina kokoa sy teo aloha karazana), izy ireo dia tonga saina amin'ny fomba rehetra adala kileman-toetra sy efa miandry amim-paharetana ny vehivavy aoka ho fantany ny zavatra tiany ho fantatro hatramin'izay.
Noho izany, ny asa dia ny hamoronana ny toe-javatra izay ny olona mahalala fa tsy manohitra ny Fiarahana.
Ary izay no mitranga dia tena manan-danja: Fivoriana miaraka ny fitiavana dia azo atao na any amin'ny fivarotana lehibe, ary teo an-kianja, ary na dia ao amin'ny kanto ny Helo-drano eo am-pototry. Any amin'ny tena tsy mendrika.
Izaho tsy te-hametraka. Mazava ho azy, izany dia tsara raha izany dia mety hampifangaro ny vehivavy, fa ny tena ratsy raha nilaza izy fa tsy hahita ny teo aloha.
Na dia ny lehilahy natanjaka indrindra, dia tsy ho lavo eo ambanin'ny fa vatolampy.
Raha toa ny anao afaka hianatra ny firaisana ara-nofo matanjaka - hitondra izany sy mianatra.
Mazava ho azy, mila miasa amin'ny tenanao handresy ny itambaram-be sy hanorina ny isan'ny"mendrika ankizivavy tsy manao izany".
Handinika ny antony manosika, ny mandinika ny tahotra, ary farany jereo ny didy napetraky ny fiaraha-monina sy ny fianakaviana. Izany dia ho tena sarotra be - azonao atao koa ny mila hevitra ny psikology, na psychoanalyst. Fa ho an'ny vehivavy amin'ny olana anatiny, ny fomba ny fotoam-pivoriana dia voavaha - tsy pretentious asa. Voalohany aho handeha amin'ny sakafo, ary avy eo-raha vao fantatro ny tenako. Isika rehetra dia manana zavatra inoana momba ny inona isika no tokony ho izy, ary izy ireo no anton ny fifandirana anatiny."Hanambady aho, dia tsy maintsy ho tsara sy mora vidy. Ka hanambady ahy, tsy Hamirapiratra,"ny tovovavy mihevitra, ary mazava ho azy, dia tsy mety ny Fiarahana na iza na iza. Ary angamba ny toerana tena mpiara-belona dia ho faly mandry manaraka anao any an-sofa sy ny boky ny sakafo nandritra ny roa ao amin'ny trano fisakafoanana. Raha fintinina, mandehana miaraka ny anaty ny sakana sy ny lehilahy mba haka aina.
ny tsara indrindra amin'ny chat roulette hihaona ho an'ny fivorian'ny ny lahatsary amin'ny chat tsy misy fisoratana anarana video firesahana amin'ny aterineto tsy misy fisoratana anarana maimaim-poana chat ankizivavy roulette tsy hihaona ho an'ny firaisana ara-nofo maimaim-poana ny mampiaraka toerana fantaro ny tanàna Mampiaraka lahatsary Skype manaitaitra ny lahatsary amin'ny chat ho an'ny mpivady